Terminology momba ny varotra an-tserasera: ny famaritana fototra | Martech Zone
Indraindray isika dia manadino ny halalin'ny fiainantsika ary manadino ny manome fampidirana amina olona fotsiny ny terminology fototra na fanafohezan-teny mitsingevana izany rehefa miresaka momba ny marketing amin'ny Internet. Tsara vintana ho anao, Wrike nametraka an'ity Internet Marketing 101 infographic izay mamaky anao amin'ny fotony rehetra terminology marketing mila mitazona resaka miaraka amin'ny matihanina amin'ny varotra ianao.
Affiliate Marketing - Mahita mpiara-miasa ivelany hamidy ny vokatrao amin'ny mpihaino azy manokana amin'ny komisiona.
Banner Ads - manintona ny sain'ny mpanjifa kendrena ka manindry izy ireo hitsidika ny tranokalanao na hahafantatra bebe kokoa ny marikao.
Content curation - Manova ny atin'ny atiny an-tserasera sy manangona zavatra avo lenta hizara, mamorona newsfeed iray tokana ho an'ny mpikambana ao amin'ny tsenanao kendrena.
Content Marketing - Mamokatra atiny mahasoa, mahaliana ary mampiala voly toy ny lahatsoratra bilaogy, ebooks, horonan-tsary & infografika hisarihana ny saina bebe kokoa, hanangana fahefana amn'ny marika, ary handresy orinasa vaovao.
Doka fanaraha-maso - mampiseho doka amin'ny tranokala manokana mifototra amin'ny atiny, na teny fanalahidy manokana hyperlink amin'ny tranokalan'ny dokam-barotra.
Fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po - mampiasa Analytics sy ny hevitry ny mpampiasa hanatsarana ny tranokalanao ary hamadika ny mpizaha mandeha ho mpanjifa mandoa vola.
Digital Marketing - mamorona traikefa mpanjifa mirindra sy miray amin'ny fantsona nomerika isan-karazany - ao anatin'izany ny finday, lalao, fampiharana, podcast, radio Internet, fandefasan-kafatra SMS, sns.
Doka aseho - manintona ny sain'ny mpanjifa kendrena ka manindry izy ireo hitsidika ny tranokalanao na hahafantatra bebe kokoa ny marikao.
Media nahazo - rehefa manaparitaka buzz ho anao ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny vava vava.
mailaka Marketing - Mandefa hafatra mailaka mahasoa, misy ifandraisany, ary mailaka amin'ireo mpandray mba hitazomana azy ireo hiaraka amin'ny orinasanao ary hananganana tsy fivadihana marika.
mampihiditra ny Marketing - manintona, mitaiza, mampahafantatra ary mampiala voly ny mpanjifa mety amin'ny alàlan'ny atiny mirakitra, SEO teknika ary fitaovana ifanakalozana, hahazoana fandraharahana sy hahazoana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa.
Influencer Marketing - manorina fifandraisana amin'ny vondron'olona voafantina izay mitaona ny fanapahan-kevitry ny varotra kendrenao.
Fitaiza nitaiza - Ny fananganana fifandraisana miaraka amin'ny fitarihana izay tsy vonona hividy amin'ny alàlan'ny atiny mahaliana, mailaka manampy, fidirana amin'ny media sosialy.
Famandrihana mitarika - Famakafakana ny fitondran-tena amin'ny Internet hitarika ny haavon'ny fahalianany amin'ny vokatrao, manome isa hanarahana ny toeran'ny mpanjifa mety hitranga ao amin'ny fantsom-pivarotana.
Marketing Automation - mandeha ho azy ny asa fivarotana miverimberina ary manaitra anao avy hatrany amin'ny fihetsiky ny mpanjifa manokana hanampy anao hamantatra ny hafatra mety halefa amin'ny olona mety amin'ny fotoana mety.
Marketing finday - Mandefa fandefasan-kafatra SMS namboarina, fampandrenesana tosika, doka anaty fampiharana, scanner QR code, ary maro hafa amin'ny fitaovan'ny mpanjifa mifototra amin'ny fihetsika manokana, toy ny toerana misy na ora andavan'andro.
Doka ara-nofo - mamorona atiny fanonta izay namboarina mba hifanaraka amin'ny tranokalan'ny mpanonta an-tserasera manokana, ary avy eo mandoa vola mba hametrahana azy eo anilan'ireo lahatsoratra hafa ao amin'ilay tranonkala.
Fifandraisana amin'ny daholobe an-tserasera - Misy heriny amin'ny media sy ny fiarahamonina an-tserasera, manara-maso izay lazain'ny olona momba ilay orinasa an-tserasera ary mitady fomba vaovao hifandraisana amin'ny mpanjifa.
Haino aman-jery tompony - ny tranonao an-tserasera manokana: tranokala ofisialy, tranokala finday, bilaogy ary pejy media sosialy.
Media karama - dokam-barotra misy karama, lahatsoratra na tohana na karoka.
Pay-Per-Click (PPC) - Mikendry mpanjifa manokana amin'ny alàlan'ny rohy tohana, ary andrana A / B hahitana hoe iza amin'ireo doka no miteraka tsindry bebe kokoa.
remarketing - mikendry dokam-barotra ho an'ny olona izay efa nitsidika ny tranokalanao (saingy tsy nividy) tamin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra manokana na tolotra manokana.
Marketing amin'ny Search Engine (SEM) - Manatsara ny fahitana tranokala amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana, manatsara ny laharan'ny tranokala amin'ny alàlan'ny SEO, saturation & backlinks.
Search Engine Optimization (SEO) - mampiditra teny fanalahidy fikarohana ambony ao amin'ny pejin-tranonkalan'ny orinasa hanatsarana ny laharan'ny valin'ny motera fikarohana ary hahazoana antoka fa hamboarina tsara ny tranokalanao amin'ny fivezivezena, atiny, marika meta manan-karena, ary rohy miditra tsara.
Sosialy sosialy - Manitatra ny tanjon'ny orinasanao amin'ireo mpihaino vaovao amin'ny alàlan'ny doka misy karama na lahatsoratra avoakan'ny tranonkala sosialy isan-karazany.
Social Media Marketing - Mampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika sy ny fifamoivoizana amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny fananganana vondron'olona mpanjifa amin'ny alàlan'ny media sosialy.
Fitsapana misaraka - fanandramana an-tsokosoko izay ahitsapana ireo variana A / B miaraka amina vondrona fanaraha-maso jamba hahitana izay manome ny valiny mahomby indrindra.
Content Contenu - mamorona atiny fanonta izay namboarina mba hifanaraka amin'ny tranokalan'ny mpanonta an-tserasera manokana, ary avy eo mandoa vola mba hametrahana azy eo anilan'ireo lahatsoratra hafa ao amin'ilay tranonkala.
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy fiarahanay izahay Wrike ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: Affiliate-barotrabanner adscurationContent Marketingireo dokambarotra ifanaovanafanatsarana ny tahan'ny fiovam-poHafanàm-po an-barotramampiseho dokahaino aman-jery nahazomailaka Marketingmampihiditra barotramarketing marketingmitarika fikarakaranascoring firakamaketing tenyautomation marketingterminology marketingfinday-barotrateratany dokam-barotrafifandraisana amin'ny Internethaino aman-jery tomponyhaino aman-jery karamamandoa isaky ny kitihoppcremarketingdinika |fikarohana OptimizationSEOdoka ara-tsosialydoka ara-tsosialySocial Media Marketingfizahana fizahanavotoaty voohana